Blackberry oo suuqa ku soo laabanaya – Somali Paper
Slider Top Tech stories
Blackberry oo suuqa ku soo laabanaya
Waxaa la daabacay February 28, 2017
Blackberry oo ah shirkad samaysa taleefanada oo laga leeyahay Canada ayaa haystay sumcad iyo saami wanagsan dhinaca suuqyadaa taleefannada gacanta, Shirkaddan oo dhidibada loo taagay sannadkii 2003 ayaa caan ku ahayd Ammaanka taas oo keentay in ay soo jiidato macaamiil badan oo daafaha dunida iyo sidoo kale dawlado iyo shirkado waawayn, Dadka mudada dheer isticmaalayay shirkaddan waxa kamid ah madaxwynihii hore ee Maraykanka Brack Obama.
Shirkaddan ayaa suuq xumo soo wajahday kadib markii ay Apple soo saartay taleefankii u horreeyay ee smart phone ah sannadkii 2007, Sannadihii u dhexeeyey 2009-2011 isticmaalayaasha taleefanada ee Maraykanka iyo wadamada yurub oo ahaa macaamiisha ugu wayn ee ay leedahay shirkaddu ayaa u batay iPhone iyo Android, taas oo ku khasabtay Blackberry inay joojiso shaqooyin badan.
Kacaa kuf badan ka dib ugu danbayn waxay saxeexday heshiis ay kula wareegayaan shirkadda kooxo maal galiyayaal ah oo go’aaminaya qaabkii ay shirkaddu taleefanno cusub oo Smartphone ah u soo saari lahayd.
TCL oo laga leeyahay China ayaa sanandihii u danbeeyayna soo saaraysa taleefannada wata calaamadda BlackBerry, horraantii sannadkan ayayna shaaca ka qaadeen inay suuqa keeni doonaan KeyOne oo ah taleefan cusub oo ku shaqaynaya nidaamka Android Nougat bisha April ee sannadkan.
Taleefankan ayay sifooyin badan wadaagaan kuwa u danbeeyey ee ay soo saarto shirkadda Samsung oo ay u horayso nidaamka uu ku shaqaynayo oo ah Android 7.0, sifooyinkiisa kalana waxa kamid ah;
Shaahshad 4.5 Inch
Kaamarada danbe oo ah 12MegaPixels halka ta hore ay tahay 8MegaPixels.
Multi Tasking oo ah in wax ka badan hal barnaamij aad hal mara iska dhinac furi kartid.
Keyboard taleefankan ayaa kaga duwanaan doono dhiggiisa isaga oo leh botoomo casri ah oo aad u adeegsan kartid qoraalka adiga oo aana riixin, sidoo kalana garanaya noocyada dhaqdhaqaaqa ama taabashada iyada oo aad ku furi kartid barnaamij walba oo ku jira taleefankaaga hal nooc oo taabasho hadii aad ku meelaysid bilowga.
Finger Print Censor Botoomada aan soo xusnay ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya inay akhriyaan xariijimaha fartaada, taas oo aad u isticmaalo karto inaad ku xidho taleefankaaga ama u isticmaashid adeegyada kale ee u baahan fartaada.
Aluminiam Sides dhinacyadiisa jaandiga ayaana u baahnayn inaad iibsato dabool ilaaliya taleefanka.
Taleefankan ayaa la filayaa inuu soo galo suuqa bisha 4aad ee sannadkan, Sida ay qortay Business Insider qiimaha uu suuqa ku soo gali doono ayaa ah $500.